Imboni Yeselula Ukushisa | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 11, 2009 NgeSonto, Septhemba 29, 2013 Douglas Karr
Imboni yeselula iyashisa impela - futhi ukumaketha kwamaselula nakanjani kuzolandela. Mhlawumbe ukuthuthuka okuhle kube yikhono lokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle.
Imali engenayo yokukhangisa ngamaselula kulindeleke ukuthi inyuke iye ngaphezulu kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-24 emhlabeni wonke ngonyaka we-2013, ihlanganiswe ngamasu wedatha asezingeni eliphansi kanye nosesho lokukhangisa olwesekelwa ukukhangisa, amavidiyo nezinsizakalo zokuqukethwe zemidlalo ngokusho kwesibikezelo esisha esikhishwe yinkampani yokuhlaziya imakethe i-ABI Research. Umthombo: I-Fierce Wireless kusukela Ucwaningo lwe-ABI.
Iholwa yi-Apple iPhone nge over 1 ukulandwa kohlelo lokusebenza ezinyangeni eziyi-9, IBlackberry, iVerizon, iMicrosoft ne-Android nakanjani zizolandela. Izinqumo eziphakeme, ukusetshenziswa okukhulu nezilawuli ezigcwele zekhibhodi kumafoni amasha kuvula imboni, kanye nejubane lokucubungula nenkumbulo. Ngisho nabadlali abadala emakethe bayazalwa kabusha… hlola iNokia N97. (Thanda isikhangiso se-virus no-LL Cool J, futhi)
Uma ungayiboni ividiyo, chofoza kokuthunyelwe, Imboni Yeselula Ukushisa. Angihambisani neselula njengoba kufanele… empeleni nje ukuphothula iziqu zeBlackberry. Umngani futhi Ukukhangisa Kwamaselula guru, u-Adam Small, uzobhalela ezinye izikhala kungekudala Martech Zone futhi ngiyilangazelele!
Tags: umkhakha weselulaukumaketha amaselula
Khulisa iTraffic Blog ngokuvuselela Okuthunyelwe Okudala Kwebhulogi
Jul 14, 2009 ku-2: 43 AM
Okuthunyelwe okuhle kwi-Mobile Industry! Ngibheke phambili ekunikeleni.